သူ့ကိုဖြုတ်ချလိုက်ရလို့ ပျော်နေကြတဲ့သူတွေကို သူ့ဝင်ငွေသိရင်ရူးသွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုကာ ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိကြောင်းကြွားလုံးထုတ်လိုက်တဲ့ ဖေ့ဘုတ် ဆယ်လီနေဆန်း – Cele Snap
ဖ့စ်ဘုတ်ဆယ်လီနေဆန်းကတော့ ..သူများနဲ့မတူတမူထူးခြားတဲ့ ..ဟာသလေးတွေတင်ဆက်ရင်းလူသိများလာခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။..လှပတဲ့မျက်နှာအမူအရာ အပြောအဆိုတွေကြောင့်လူအများရဲ့အားပေးမှုကို… ပိုင်ဆိုင်ထားသူ တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ..ထို့ပြင် နေဆန်းကပရိသတ်တွေ အားပေးမှုကြောင့် ..ရရှိလာခဲ့တဲ့ ဝင်ငွေများဖြင့် ..သိန်းထောင်ချီ တန်သောအိမ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်.. ဆောက်လုပ်… နေထိုင်လာနိုင်လာခဲ့ပါ တယ်
နေဆန်းက.. လက်ရှိမှာတော့ ..သူဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေ ကိုလုပ်ကိုင်ရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိကာ.. အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိဆွတ်ခူးနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။.. နေဆန်းကလည်းသူ့ရဲ့အလုပ်ကို.. အာဏာသိမ်းခံထားရချိန်တောင်မှ ..မနားပဲ ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ လုပ်ကိုင်နေလျက်ရှိပါတယ်။နေဆန်းဟာ.. အာဏာသိမ်းခံထားရတာတောင်မှ.. ဂရုမစိုက်ပဲ အလုပ်တွေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် ပြည်သူများရဲ့ …အပြစ်တင် ဝေဖန်မှုကိုလဲ.. အပြင်းအထန် ခံနေရပါတယ်မကြာသေးမှီကပဲ… နေဆန်းနှင့် ပတ်သတ်သည့် ကြော်ငြာများရိုက်ကူးထားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များကပရိတ်များတောင်းဆိုချက်အရ နေဆန်းနှင့် …ရိုက်ကူးခဲ့သည့် ကြော်ငြာများ ပိုစတာများကိုဖျက်ခဲ့ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းတောင်းပန်စာ….များရေးသားခဲ့ကြပါသည်။နေဆန်းအပါအဝင်… ဖြူဖြူထွေးဟာလည်း ယနေညတွင် ကြော်ငြာများဖြုတ်ချခံခဲ့ရပါ တယ်။
နေဆန်းဟာ ယခုသူရဲ့… အကောင့် Mydays မှာ ပြည်သူများကိုကျေးဇူးကန်းသော…စာသားများကို တင်ထားတာတွေ့ရပ်တယ်… သူတင်ထားတဲ့ စာတွေကတော့…
“အော် ပျော်နေလိုက်ကြတာ ထိုင်းဘက်မှာငါငွေတွေ ဘယ်လိုငွေတွေ ၀င်နေလဲဆိုတာ သိသွားရင် ရူးသွားမယ်…ဒီလိုဝေဖန်မှုတွေ ကြောင့် အလုပ်လုပ်ဖို့ မပျင်းတော့ဘူးညဘက် ထိုင်းဘက်က အလုပ်လာအပ်တာ သိန်း 100 ကျော်”…
ထို့အပြင် နေဆန်းက မြန်မာတွေ အားမပေးလဲ ..ထိုင်းဘက်က ပရိသတ်များနဲ့… ထိုင်းရောက်မြန်မာ ပရိသတ်တွေ အခိုင်မာ ..ရှိကြောင်း သူတို့နဲ့ပဲ …အလုပ်ဆက်လုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုအောက်ပါအတိုင်း ဖော်ထုတ် ရေးသားခဲ့ပါတယ်… သူရေးသားခဲ့တာကတော့ထိုင်းဘက်မှာ Videoတင်ဖို့ ..သိန်းထောင်ချီတန်.. စာချုပ်များ ချုပ်လိုက်ပြီးထိုင်းသူဌေးမတွေ ရော သူ့အားပေးတဲ့ ..ထိုင်းက ..ပရိသတ်များကိုလဲ ကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ပါတယ်ဒါတင်မကသေးပဲ…. ဝေဖန်သူများ ဆွေ့ ဆွေ့ခုန်သွားအောင်သူ TikTokဆော့ဖို့ရယ် Video… ရိုက်ကူးဖို့အတွက်ေ နာက်ထက် …သိန်း4000တန်ဖိုးရှိသောအလုပ် အိမ် အသစ်တလုံး ဆောက်နေကြောင်းကိုလဲ …တစ်ခါထဲ ထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တာပါနော်…. နေဆန်း အပေါ်အမြင်လေးကိုလည်း မျှဝေခဲ့ကြပါ အုန်းနော်။
ဖ့ဈဘုတျဆယျလီနဆေနျးကတော့ ..သူမြားနဲ့မတူတမူထူးခွားတဲ့ ..ဟာသလေးတှတေငျဆကျရငျးလူသိမြားလာခဲ့တဲ့သူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။..လှပတဲ့မကျြနှာအမူအရာ အပွောအဆိုတှကွေောငျ့လူအမြားရဲ့အားပေးမှုကို… ပိုငျဆိုငျထားသူ တဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ ..ထို့ပွငျ နဆေနျးကပရိသတျတှေ အားပေးမှုကွောငျ့ ..ရရှိလာခဲ့တဲ့ ဝငျငှမြေားဖွငျ့ ..သိနျးထောငျခြီ တနျသောအိမျကောငျးကောငျးမှနျမှနျ.. ဆောကျလုပျ… နထေိုငျလာနိုငျလာခဲ့ပါ တယျ
နဆေနျးက.. လကျရှိမှာတော့ ..သူဝါသနာပါတဲ့အလုပျတှေ ကိုလုပျကိုငျရငျး ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးမှုကိုရရှိကာ.. အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိဆှတျခူးနပွေီပဲ ဖွဈပါတယျ။.. နဆေနျးကလညျးသူ့ရဲ့အလုပျကို.. အာဏာသိမျးခံထားရခြိနျတောငျမှ ..မနားပဲ ကွိုးကွိုးစားစားနဲ့ လုပျကိုငျနလေကျြရှိပါတယျ။နဆေနျးဟာ.. အာဏာသိမျးခံထားရတာတောငျမှ.. ဂရုမစိုကျပဲ အလုပျတှေ ဆကျလကျ လုပျဆောငျနတောကွောငျ့ ပွညျသူမြားရဲ့ …အပွဈတငျ ဝဖေနျမှုကိုလဲ.. အပွငျးအထနျ ခံနရေပါတယျမကွာသေးမှီကပဲ… နဆေနျးနှငျ့ ပတျသတျသညျ့ ကွျောငွာမြားရိုကျကူးထားသညျ့ လုပျငနျးရှငျမြားကပရိတျမြားတောငျးဆိုခကျြအရ နဆေနျးနှငျ့ …ရိုကျကူးခဲ့သညျ့ ကွျောငွာမြား ပိုစတာမြားကိုဖကျြခဲ့ပေးပွီးဖွဈကွောငျးတောငျးပနျစာ….မြားရေးသားခဲ့ကွပါသညျ။နဆေနျးအပါအဝငျ… ဖွူဖွူထှေးဟာလညျး ယနညေတှငျ ကွျောငွာမြားဖွုတျခခြံခဲ့ရပါ တယျ။
ထို့အပွငျ နဆေနျးက မွနျမာတှေ အားမပေးလဲ ..ထိုငျးဘကျက ပရိသတျမြားနဲ့… ထိုငျးရောကျမွနျမာ ပရိသတျတှေ အခိုငျမာ ..ရှိကွောငျး သူတို့နဲ့ပဲ …အလုပျဆကျလုပျသှားမညျ ဖွဈကွောငျးကိုအောကျပါအတိုငျး ဖျောထုတျ ရေးသားခဲ့ပါတယျ… သူရေးသားခဲ့တာကတော့ထိုငျးဘကျမှာ Videoတငျဖို့ ..သိနျးထောငျခြီတနျ.. စာခြုပျမြား ခြုပျလိုကျပွီးထိုငျးသူဌေးမတှေ ရော သူ့အားပေးတဲ့ ..ထိုငျးက ..ပရိသတျမြားကိုလဲ ကြေးဇူးတငျစကားပွောခဲ့ပါတယျဒါတငျမကသေးပဲ…. ဝဖေနျသူမြား ဆှေ့ ဆှခေု့နျသှားအောငျသူ TikTokဆော့ဖို့ရယျ Video… ရိုကျကူးဖို့အတှကျေ နာကျထကျ …သိနျး4000တနျဖိုးရှိသောအလုပျ အိမျ အသဈတလုံး ဆောကျနကွေောငျးကိုလဲ …တဈခါထဲ ထုတျဖျောရေးသားခဲ့တာပါနျော…. နဆေနျး အပျေါအမွငျလေးကိုလညျး မြှဝခေဲ့ကွပါ အုနျးနျော။